Khabar Break - स्ववियु सचिव अधिकारीसँग ५ प्रश्न
अन्र्तरवार्ता उज्जवल अधिकारी
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(अनेरास्ववियु) मकवानपुरका ३ नं क्षेत्रीय अध्यक्ष आकाश अधिकारी गत फागुन १८ गतेको स्ववियु निर्वाचनबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु)मकवानपुर बहुमुखि क्याम्पसको सचिव पदमा अत्याधिक मतले विजयी भए । मकवानपुर बहुमुखि क्याम्पसमा सचिव भएपश्चात् स्ववियुले गरेका क्रियाकलाप र भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत भएर हाम्रा विशेष संवाददाता उज्जवल अधिकारीले उनीसँग लिएको अन्तवार्ता पढ्नुहोला ।
१. स्वागत छ तपाईँलाई खबरब्रेक डटकममा । पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
– धन्यवाद उज्जवल जी । फागुन १८ गते भएको स्ववियु निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात् हामीले चैत्र ७ गते सपथ ग्रहण गर्यौ र पदभार सम्हाल्यौँ । त्यस पश्चात् हामी क्याम्पसका गतिविधिहरु, प्रशासनका गतिविधिहरुलाई नियाल्दै छौँ । र त्यहाँ रहेका समस्याहरुलाई टिपोट गर्दै छौँ । क्याम्पसमा आगामी दिनमा हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कामहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्ययोजनाहरु बनाउँदै छौ । विद्यार्थीको समस्या सुल्झाउनको निम्ति क्याम्पसमा क्रियाशिल छौँ ।
२. स्ववियु सचिव हुनु अघि यहाँले मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरुसँग थुप्रै एजेण्डाहरु लिएर भोट माग्नुभएको थियो । १ महिनाको कार्यकालमा विद्यार्थीहरुको लागि के के गर्नुभयो त ?
– हामिले पद सम्हालिसकेपछि , पदस्थापनाको अवसर पारेर हामीले क्याम्पस सरसफाई कार्यक्रमबाट आफ्नो कामको सुरुवात ग¥यौँ । जसको समाचार यस लोकप्रीय अनलाइन खबरब्रेक डटकममा पनि प्रकाशित भएको थियो । र आगामी दिनमा क्याम्पसको भौतिक सरसफाई मात्र होइन, गलत प्रवृतीको सरसफाई, प्रशासनमा रहेका प्रशासनिक फोहोरको सरसफाई र केही कर्मचारी/प्राध्यापकहरुमा रहेको गलत नियतको पनि सरसफाई गर्नेछौँ । हामीले विद्यार्थीमाझ लिएर गएका एजेण्डालाई आधा इन्च पनि दायाँबायाँ नभइकन , विचलित नभइकन त्यस्लाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति लागिपर्ने छौँ । त्यसपछि हामी विद्यार्थीले भोग्नुपरेका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नका निम्ति लागिपरेका छौँ । जस्तै क्याम्पसको एउटा बिल्डिङमा खानेपानीको व्यवस्था थिएन, अबको केही दिनमा त्यहाँ खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ , गेटबाट ‘सी’ ब्लक जानका निमित्त बर्खा सिजनमा चौर हिलो हुँदा विद्यार्थीलाई पर्ने समस्याको समाधान गर्न बाटो निर्माण कार्य अघि बढिसकेको छ । छात्रवृती विधीवत रुपमा वितरणको कुरा, पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी योजना बनाएर चाँडो भन्दा चाँडो यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पहल गर्न लागेका छौँ ।
३. मकवानपुर बहुमुखि क्याम्पसमा धेरै राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरु क्रियाशिल छन् । तपाईँ एमाले निकट अनेरास्ववियुको प्यानलबाट विजयी हुनुभएको उमेवद्वार ,।अरु संगठनहरुको दबाब कतिको आइरहेको छ ? चुनाव अघि जति बोल्नुभएको थियो, त्यति काम गर्न सक्नुहुन्छ त ?
–चुनावमा लड्दा हामीले अनेरास्ववियुको प्यानलबाट एकल लड्यौँ । अनेरास्ववियुलाई माया गरेर , भरोसा गरेर र हिजोको दिनमा पनि अनेरास्ववियुले स्ववियुमा एकल प्यानल जितेर क्याम्पसमा गरेका कामहरुको आधारमा विद्यार्थी साथीहरुले धेरै भन्दा धेरै मत हालेर हामीलाई जिताउनु भयो । हामीले त्यो विश्वासको मतलाई खेर जान दिँदैनौँ । वास्तवमा हाम्रो जित भनेको आम विद्यार्थीको जित हो भन्ने कुरालाई विद्यार्थीले महशुस गर्ने गरी काम गर्छौ । जहाँसम्म अरु संगठनको दबाबको कुरो छ , अरु संगठनको साथीहरु पनि स्ववियुमा रहनुभएको कारणले गर्दा वहाँहरुको सहकार्यमा काम गर्नेछौ । र अनावश्यक दबाबलाई हामीले छिचोल्दै अघि बढ्छौँ । स्ववियु भनेको साझा विद्यार्थीको संगठन हो , त्यही हिसाबले हामी काम गर्छौ ।
४. २४ महिने कार्यकालभर र्निविवादित भएर पद सम्हाल्न के के योजना बनाउनभएको छ ?
–विद्यार्थीको हितका निम्ती हामीले केही योजनाका केही ड्राफ्टहरु तयार पारेका छौँ । र जहाँसम्म मलाई लाग्छ, विद्यार्थीको हित हुने कार्यक्रम, क्याम्पसको हितहुने कार्यक्रमप्रति कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले विवाद निकाल्नु हुनेछैन । र यदी राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले ती कार्यक्रमलाई हिट गर्ने उद्देश्यले वा विरोध गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि विद्यार्थी संगठन आउँछन् भने, त्यस्को प्रतिकार विद्यार्थीले नै गर्नेछन् । र्निविवादित भएर काम गर्ने कुराको प्रयत्न अधिकतम गरिने छ ।
५. अन्त्यमा खबरब्रेक डटकम पढिरहनुभएका दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? केही छुटेको भए भन्नुहोला ? समय दिनुभयो धन्यवाद !
– सर्वप्रथम हामीलाई मत दिएर जिताउनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ । विद्यार्थीको समस्या हाम्रो समस्या हो, यस्को समाधान गर्न हामी सँधै क्रियाशिल रहने छौँ । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको समृद्धि र विकासको निम्ति हामी सदाझैँ दत्तचित्त भएर लाग्ने छौँ । मेरा कुरा आम जनता माझ, विद्यार्थी र विद्यार्थीको अभिवाभकहरु माझ र मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको हित चिताउने शुभचिन्तमहरु माझ पुग्ने गरी मेरा विचारहरु राख्ने मौका दिनुभो । तपाईँ र खबरब्रेक युनिटलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।